Ukubuyiswa INQUBOMGOMO -
This policy governs your purchase of ExactSpy – the smartphone monitoring application. Sicela uyifunde ngokucophelela ngaphambi kokuqeda oda lakho njengoba ubeka amalungelo akho maqondana ukuthenga kwakho, kuhlanganise ukulinganiselwa ezibalulekile kanye ukukhishwa. Nokubekwa lwakho umyalelo ziyini esivumelwaneni sakho ukuba oda lakho kubuswa le nqubomgomo.
Uma ungenelisekile ngokugcwele nokuthenga kwakho software kanye namasevisi, ungathola imali yakho emuva phezu kwemigomo nemibandela ebhalwe ngezansi. Nokho, sikholelwa ukuthi iningi obuyiselwa kungagwenywa uma uthola usizo lobuchwepheshe ochwepheshe bethu.
Kuncike kule yokubuyiselwa kwemali izimo Policy, kungenzeka ukufanela ukuthola imali egcwele phakathi 5 izinsuku kulandela usuku lokuthenga kwakho ehlinzekiwe izizathu zakho awaphikisani kanye izimo yokubuyiselwa kwemali Policy.
Akukho imali izotholakala emva lesi sikhathi imali kuyinto engaphezu.
Asazi ukukhipha ukubuyiselwa imali umane ushintsha umqondo wakho. Uma uhlangabezana nezindaba technical nge software yethu, sizosebenza nawe ukuxazulula lezi zinkinga ngendlela okufika ngesikhathi. Uma lezi zimpikiswano angeke ixazululwe, uzothola imali uma software is kungase kutholakale enesici. Siyaligodla ilungelo abuyisele umyalelo nokusekelwa Nqamula kanye service uma esongela nathi noma siluthola usebenzisa isevisi ngezinhloso Ayivumeliwe.
Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzokhishwa kunoma yekhasimende ngubani bengakwazi noma ungazimisele jailbreak iPhone abo kanye / nobe iPad. I iOS ukufakwa Umhlahlandlela page kule website uchaza ngokusobala ukuthi zonke iPhones kanye / nobe iPads kumele jailbroken ngaphambi yokufaka futhi ibuye, at iphuzu lokuthenga, ikhasimende uyavuma kule mfuneko.
Uma ikhasimende uthenga le software futhi akanayo ukufinyelela okungaphazamiseki (kuhlanganise izingidi, passcodes, njll) efonini ukuba ziqashwe, akuthina akhokhe obuyiselwa ngenxa kulesi simo.
Uma umsebenzisi target phone kushintsha Isiphathi wakhe futhi lokhu kuphumela ukulahlekelwa esinqunyiwe noma ephelele inthanethi zokuxhuma, updates OS or restoring to factory settings and consequently incorrect ExactSpy functioning, akukho ukubuyiselwa kwemali okuzokhishwa futhi.
Yimuphi yekhasimende othi benza ukuthenga ngephutha noma zithunyelwe imininingwane zomgunyathi ngeke balahlekelwa ilungelo lokuba yimuphi imali futhi sizoqhutshwa akhokhe for wonke amacala for ukuthengiselana. Sicela uqaphele ukuthi uma ufaka umjikeleto entsha subscription lokukhokhisa, obuyiselwa ngeke unikelwe ngenxa nkathi entsha.
Ngokuba konke lokho oda ezibekwe phezu isimo Phikisa, unayo 14 izinsuku isikhathi ukuxazulula isimo nge Ukusekela Amakhasimende ethu Team. Uma uhluleka ukuhlinzeka ulwazi oludingekayo noma umbiko kungakapheli isikhathi esinikeziwe, impikiswano kuzokhanselwa futhi akukho imali ngeke kwenzeke ngemuva kwalokho..